Iitattoo zeWolf | Ukuzoba
USergio Gallego | | IiTattoos zezilwanyana
Iitattoo zeWolf yenye yezona zixhaphakileyo namhlanje. Sisilwanyana esinentsingiselo ebalulekileyo kwindalo. Ingcuka imele amaxabiso anjengokunyaniseka kunye namandla. Ngumfanekiso wobukhokho wobukumkani obufanelwe ukuba nolusu lwakho.
Emva koko siza kuthetha ngayo yonke into ejikeleze iitattoo malunga neengcuka kunye Kutheni le nto uninzi lwabantu lukhetha olu hlobo lweeTattoos ukuba lubabambe kulusu lwabo.
1 Imbali kunye nemvelaphi yeetoto zeengcuka
2 Ithetha ukuthini itattoos?
3 Uyilo lwe tattoo olunokwenzeka
4 Kuphi ukufumana itattoo yengcuka
Imbali kunye nemvelaphi yeetoto zeengcuka
Inja ithathwa njengeyona ilungileyo iqabane lomntu. Ingcuka ngukhokho wenja, kungoko ukubaluleka kwayo ngokunxulumene nomsila wayo. Iingcuka zihlala kwiipakethe kwaye ngaphandle kokuba ziindlobongela zithembekile. Bahlala bebonwa njengezilwanyana ezoyikekayo kodwa ngokuhamba kwexesha, abantu abaninzi bayitshintshile imbono yabo kwaye bazibona njengezilwanyana ezinomdla.
Uloyiko olunjalo belusoloko lubangelwa lilivo lengcuka. Oku kunyuse uloyiko lwesi silwanyana uninzi lweplanethi. Nangona kunjalo kwinkcubeko yaseMpuma ithathwa njenge isilwanyana esinceda ukuba nethamsanqa ebomini kwaye sikhulise usapho.
Ithetha ukuthini itattoos?
Njengoko sele sibonisile apha ngasentla, uninzi lwabantu luthatha isigqibo sokufumana itattoo yengcuka. Itattoo yengcuka inokuthetha izinto ezininzi. Phakathi kwamaxabiso abalulekileyo ngala: ukunyaniseka, usapho, ubunkokeli, ukomelela okanye ubukrelekrele. Njengoko ubona, itattoo yengcuka inokuthetha izinto ezininzi, ubukhulu becala zilungile.
Uyilo lwe tattoo olunokwenzeka
Ezo tattoos zinokuba zizele ngokupheleleyo okanye zibonise kuphela intloko. Uyilo ngalunye lunentsingiselo yalo ukuze umntu ngamnye akhethe intsingiselo ye tattoo xa esenza.
Kukho abantu abathatha isigqibo sokunyathela imvuthuluka yengcuka ukuze babonakalise umnqweno wokuqhubeka nokudibana neenjongo ezibekiweyo. Ubuso bengcuka bunokubonisa ubomi kunye nokuswela uloyiko lokufa.
Ukuba, ngokuchaseneyo, umntu uthatha isigqibo sokutattoo emehlweni engcuka, oko kunokubonisa ukuba banamandla athile okubona ngaphaya kwesiqhelo. Amehlo la abhekisa kwimiphefumlo yabantu.
Kuphi ukufumana itattoo yengcuka
Ngaphambi kokuba ufumane itattoo yengcuka, kubalulekile ukuthetha ngemibala. Owona mfanekiso uphambili unokuba yimibala eyahlukeneyo, inokuba mhlophe, mnyama, bomvu okanye luhlaza okwesibhakabhaka. Umbala uya kubonisa imeko yengcuka.
Ngokumalunga nobungakanani, kukho abantu abakhetha iitattoos ezincinci ezifanelekileyo kwiindawo zomzimba njengentamo, isandla okanye ingalo. Ukuba kwelinye icala, ingcuka inkulu, eyona ifanelekileyo kukuyifaka itattoo ngasemva, iingalo okanye imilenze.
Ngamafutshane, iitattoos malunga neengcuka yenye yezona zidumileyo kwaye abantu abaninzi banquma ukuthatha iitattoo. Kubalulekile ngaphambi kokuthatha inyathelo, ukuya kwingcali eyaziyo into eyenzayo. Kwiimeko ezininzi umphumo awuyiyo le nto uyifunayo kwaye kuya kufuneka uyazi ukuba itattoo yeyobomi.
Ukuba ucacile, sukuyicinga kwaye uqhubeke. Ukuba unamathandabuzo malunga noyilo, kuyacetyiswa ukuba uye kwingcali kwaye ucele iingcebiso okanye iingcebiso kuyilo olifunayo. Umzobi we tattoo unokukucebisa ngobungakanani be tattoo kunye nendawo efanelekileyo yokuyinxiba. Ingcuka lukhetho olufanelekileyo xa ukhetha itattoo, ibonisa ukuthembeka, usapho okanye ubunkokeli, onke amaxabiso abaluleke kakhulu namhlanje. Ukuba ungumzali olungileyo kwaye ukhusela abantwana bakho nakuphi na ukubuyela umva, ingcuka yeyona tattoo ilungileyo onokuyifumana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zezilwanyana » Iitattoo zeWolf
Iitattoos esandleni, ubuchule kunye neengozi
Iitattoos kubathandi, uthando luyasimanya!